China GD-EMB-013 ： igwe eletrik igwe eletrik, 26 nke anụ ọhịa ahụ, batrị lithium maka okenye enyere E-igwe kwụ otu ebe, ụlọ ọrụ ojii ebike na ndị nrụpụta | GUODA
GD-EMB-013 ： igwe eletriki ugwu eletrik, 26 nke anụ ọhịa ahụ, batrị lithium maka okenye enyere E-igwe kwụ otu ebe, nwa ebike
E-MTB anyị nwere batrị lithium ogologo ndụ nke nwere ike ịnagide ọtụtụ ịnyịnya, obere ma ọ bụ ogologo, maka afọ ndị na-abịa. e nweghị ụgbọ ịnyịnya toro ogologo, o nweghị ibu dị arọ, o nweghịkwa ebe ụkwụ gị na-agaghị ebu gị.
Ngwongwo na-arụ ọrụ na ujo absorption nke ubu aluminum
JAK Front na azụ diski breeki
Ike njikwa na slideway
Igwe ọkụ pụrụ iche maka igwe eji ebu snow nke anụ ọhịa 26
Micro gbanye ọsọ ọsọ asaa
Nke atọ gia mere ngwá
Echiche: Ngwaahịa ahụ na-akwado agba dị iche iche, moto, batrị, aha ndị mebere, Logo na ndị ọzọ. (OEM & ODM)
Nke gara aga: GD-EMB-012 ： Igwe eletriki ugwu, 36v, batrị lithium, Mita ọkụ, ike enyere aka, 200 - 250w
Osote: GD-EMB-014 ： Igwe eletriki igwe eletrik dị ike, 36V 250W, igwe kwụ n'azụ, oghere alloy
A na-emepụta igwe eletrik anyị (e-MTB) iji mezuo ọchịchọ ndị na-agba ịnyịnya ịga n'ihu, na-aga ngwa ngwa ma nweta ahụmịhe kachasị elu. E wuru ya na ihe nketa nke ụlọ siri ike na teknụzụ nkwusioru. Igwe eletriki igwe na-enyere igwe aka aka na-eme ka ike gwụ gị na-abawanye ụba ma na-ekwupụta ọnụ ọchị nke ị ga-enwe n'okporo ụzọ. Ndị a bụ e-anyịnya igwe na-ahapụ gị ịnụ ụtọ karịa ihe ọ bụla na-eme ka igwe kwụ otu ebe dị oke mma.
36V500W igwe eletriki igwe
Al alloy 26 sentimita ugbo agha
Al alloy electric ụgbọ mmiri
abụba taya eletrik ụgbọ mmiri